Nepal Dayari | ब्रिटिस आर्मी र सिंगापुर पुलिसमा भर्ती खुल्दै, यति ठुलो सङ्ख्यामा लिदै छ नेपाली लाइ, के छ प्रक्रिया ?
ब्रिटिस आर्मी र सिंगापुर पुलिसमा भर्ती खुल्दै, यति ठुलो सङ्ख्यामा लिदै छ नेपाली लाइ, के छ प्रक्रिया ?
असार ११, २०७८ शुक्रबार ३९७ पटक हेरिएको
काठमाडौं, १५ वैशाख : बेलायती रक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको गोर्खा ब्रिगेड एशोसिएशनले नयाँ भर्ना खुलाएको छ । इन्टेक २०२१-२२ का लागि ब्रिटिश गोर्खा र सिंगापुर पुलिस फोर्सका लागि साढे पाँच सयको लागि भर्ना खुलाउने नोटिस जारी गर्ने तयारी मा छ ।
बेलायती सेनाले एक सूचना जारी गर्दै नेपालको धरान र पोखराबाट भर्ती लिइने जानकारी गराएको छ ।ब्रिटिस गोर्खा र सिङ्गापुर पुलिसको प्रशिक्षण दिन भनेर खोलिएका संस्थाहरुसँग बेलायती सेनाको कुनै सम्बन्ध नरहेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न त क्लिक गर्नुहोस्
गोर्खा भर्ती हुन चाहने नेपाली युवाका लागि धरान र पोखरामा भएकै पटक आवेदन खुल्ने भएको छ । गोर्खा भर्तीका लागि आउँदो डिसेम्बरमा २७ देखि जनवरी ७ सम्म आवेदन गर्न सकिने सूचनामा जानकारी गराइएको छ । *नोट महामारी अन्त्य भएन भने उक्त समयमा घटबड हुन सक्ने। यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न त क्लिक गर्नुहोस्
बेलायती सेनाको भर्ती प्रक्रियामा कुनै शुल्क नलाग्ने र छनौट प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी हुने दाबी गरिएको छ । कसैले गोर्खा भर्ती लगाई दिने प्रलोभनमा आर्थिक लाभ लिन खोजे जानकारी गराउन समेत सूचनामा आग्रह गरिएको छ । यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न त क्लिक गर्नुहोस्